आश्वासनको पोको बाड्नेलाई होइन् देश विकास गर्ने उम्मेद्वार चुन्न कोरियाबाट एक नेपाली युवाको आह्वान :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
सुलभ बन्धु पोखरेल, दक्षिण कोरिया
नेताहरूले भाषण गरिरहे हामिले ताली बजाइरहेउ । एउटाले अर्कोलाई गाली गर्दा खितितिती हासेउ । अर्कोले सराप्दा धारे हात लागाएउ। तर हामै कारणले आफ्नै अनुहार तिर देखाउदै भाग्यले "ईश" गरेको कहिल्यै पत्ता लगाउन सकेनौ। एक छाक मासु र रक्सीको लागि उनीहरुको पछि पछि दुगुरेउ। तर परिवारलाई एक छाक खुवाउनको लागि बिदेश भासिनु परेको पत्तो पाएनौ। सधैं भरी नेताले देखाएको ठुलाठुला सपनाका महलमा सुतिरहेउ। तर आफ्नो घरको छानोबाट पानी चुहिएर कानमा पर्दा समेत चाल पाएनौ। हो तेसैले गर्दा हो हामी पछाडी परेको । अर्कोले ल्याइदेला र खाउला भनी हात पाखुरा बाधेर बसिरहेउ हो तेसैले हो हामी गरिब बनेको । अब पनि तेसरी नै बसेउ भने र त्यस्ता कुराहरुलाई चिन्न र चिर्न सकेनै भने हामी कहिल्यै अगाडी बढ्न सक्दैनौ।
सुगम ठाउँ अनि अति दुर्गम ठाउँमा बस्ने हामी हाम्रै कारणले त पछाडी परेका होइनौ? सोचौ त एकपटक ! २०४८ को चुनावमा दिएका सपना , ५१ मा देखाएका आशा , ५६ मा थुपारेका आश्वासन , ६४ का समृद्धिका भाषण , ७० मा बडेका बिकासे लहरका ओठे तर्कना.। यीनिहरु बाट हामिले के लिन सकेउ भनेर कहिल्यै सोचेनौ तर निरन्तर उनिहरुकै झोले बनेर पछि लागि रहेउ। चुनाबै पिच्छे घोषणापत्र थमाएका नेताहरू र तिनीहरुका दल लाई फेरि भोट माग्न आउदा तेहि घोषणा पत्र देखाएर कति काम गरेउ र भोट माग्न आयौ भनेर सोध्ने हिम्मत गरेनौ। अनि कसरी बन्न सकिन्छ समृद्ध । आफ्नो ठाउको चासो दिने जिम्मेवारी हाम्रै होइन र?
आज चुनावको मुखमा गाउँ गाउँमा नेताहरूको ताती लागेको छ आश्वासनहरुको बाढी लागेको छ । आज कुरा सुन्दा र हेर्दा लाग्छ एक दुई बर्षमै देश सिंगापुर बनाउदैछन। कसैले आजैदेखि पिच गर्छु भन्छन कसैले सुरुङ खन्छु भन्छन हामी ताली बजाइरहन्छौ रमिते बनेर। बिकासे नारा घन्काउदै राजनीति गर्न पल्केका नेताले देशमा कायापलट गर्दिछौ भन्दै आशाका थुप्राहरु थोपरेका छन हामिले तिनै आशाका थुप्रोमुनि बाट समृद्ध चाहनाको पोकाहरु खोतल्नु छ। खाली त्यो भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिएको बाहानाबाजी लाई मात्रै सुन्ने होइन सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ। पटक पटक राज्यको सुबिधा र सत्ताको स्वाद चाख्न र ठेक्कापट्टा आफ्नो पोल्टामा पर्न र ब्रह्मलुट मच्चाउन पाइन्छ भनेर हिड्ने हरुलाई थान्को लगाउने बेला आएको छ। अब एस्ता नेतालाई जनताले जिताएर पठाउने छैनन जनता सुसूचित छन।
हामी राष्ट्रको जटिलमोड बाट बाहिर निस्कन खोजिरहेका छौ यश पटक हामिले सचेत पुर्वक मत जाहेर गर्नु पर्ने हुन्छ। यो संबिधान कार्यान्वयनको पहिले चरण हो हामिले स्थाइ सरकार दिनै पर्छ । स्थिर सरकार बाट मात्र सम्बृदी को कल्पना गर्न सक्छौं । हामीले नेताहरु अस्थिर भए भनेर गालीगरेर मात्र हुदैन । स्थिरता जनताको मत बाट स्थापित हुने हदा जनताले सचेतता पुर्बक मतदान गर्न जरुरी छ । हाम्रो देशमा अब व्यवस्था को लडाई सकियको छ । बाम गठबन्धन हुन कि लोकतान्त्रिक गठबन्धन अबको बाटो स्थिरता र बिकास को हुन पर्छ । जनताले स्थिरता सहित बिकास गर्नसक्ने गठबन्धनका उम्मेद्बार हरुलाई जिताएर पठाउनु पर्दछ। यसको लागि दलहरुको बिगतलाइ मुल्यांकन गर्न जरुरी छ । कसले पटक पटक बहुमत पाउँदा पनि स्थिरता दिन सकेन कसले अस्थिरता को बिचपनी जनताको सुखदुःख मा मलम लगाउने प्रयासगरे । यसको मुल्यांकन गर्दै प्रतिनिधि सभामा र प्रदेशसभामा पुर्ण बहुमत सहितको सरकार आउने र ५ बर्ष भित्र नेपालीले गर्बगर्न लाएक काम हरु हुने गरि हामी जनताले मतदान गर्नु पर्छ । हामिले मत जाहेर गर्ने नाउमा झोले र नबोले बनेर मत दिनु हुदैन हाम्रो लाई भन्दा , राम्रो लागि अनि आवस्यक पर्दा कान समातेर काम गराउन सक्ने उमेदवार लाई मात्रै मत दिनु पर्दछ। उनीहरु हाम्रा देवता होइनन हाम्रा सहयोगी हुन भनेर मत दिन जरुरी छ। उनीहरुको पछी लागेर जयजयकार गर्नको लागि होइन सहज र सरलताको लागि मत दिन आवस्यक छ। यो अवसर नेपालीले गुमाए भए फेरि शयौ बर्ष पछाडी धकेलिन बाध्य हुने छौ। सचेत पुर्वक देशका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि बहुमत अाउनसक्ने गठबन्धन का उमेदवारहरुलाई जित को टीका लगाएर पठाउन जरुरी छ यस पटक नेपाली जनताले आफ्नो अभिमत आम जनताको लागि स्थिर सरकार दिन सक्ने गठबन्धन लाई दिने छन पुर्ण आशावादी छु
प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २५ (November 11, 2017)